[APK] Afaka mamorona vondrona hatramin'ny 256 olona izao ianao amin'ny WhatsApp | Androidsis
Manuel Ramirez | | apk, Fampiharana Android, About us, WhatsApp
WhatsApp dia mitombo hatrany ny fahitana ao Telegram ho loharanon'ny aingam-panahy handeha anisan'izany ny endri-javatra sasany izay avoakan'ny faharoa matetika. Raha mitady fanavaozana amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra ianao dia Telegram no mety aminy ary asehon'ny ekipany mpamorona fa hain'izy ireo tsara ny manao zavatra. Azontsika atao ny manome tsiny kely ny fampiharana fandefasan-kafatra noforonin'ireo mpirahalahy Nikolai sy Pavel Durov, satria afaka fotoana fohy dia azon'izy ireo natao "nampitahotra" an'i WhatsApp ireo vaovao marobe izay ampidirin'izy ireo ao anatin'ny fampiharana fandefasan-kafatra be ataon'izy ireo. Na i WhatsApp aza manapaha fahaizana mizara URL an'ny Telegram avy amin'ireo hafatra ao amin'ny app anao.
Iray amin'ireo zava-baovao tsy mampino izany nitondra Telegram niaraka taminy tao anatin'ny iray tamin'ireo fanavaozam-baovao tamin'ny volana lasa izay nahitana ireo vondrona lehibe indrindra nahitana olona 1.000 hizara ny karazana hafatra, horonan-tsary ary traikefa. WhatsApp izao, amin'ny roa volana sy tapany, ilay iray dia ahitana an'ity vaovaon'ny vondrona super ity na dia misy andiam-pifanarahana toa ny isa kely kokoa amin'ny fahafahany izay mahatratra 256 fotsiny ny olona. Farafaharatsiny farafaharatsiny ampitahaina amin'ny 99 miaraka amin'ilay isa isaina talohan'ity fanavaozana vaovao ity izay azonao idirana avy amin'ny APK izay zarainay amin'ny faran'ny lahatsoratra.
1 Mpampiasa sy vondrona 1.000 lavitrisa
2 Fahasamihafana amin'ny Telegram
Mpampiasa sy vondrona 1.000 lavitrisa
Roa andro lasa izay vao fantatsika fa nahatratra ny WhatsApp ny WhatsApp 1.000 an-tapitrisany mpampiasa manerana an'izao tontolo izao. Zava-dehibe ho an'ity orinasa ity izay nipoitra avy aiza tsy ho azon'ny Facebook roa taona lasa izay hahazoana vola be. Fampiharana iray izay nitombo isa ny fiasa, satria eo ambany fiarovan'ny orinasan'i Mark Zuckerberg io, toy ny antso an-tariby na ny fahaizana mandrindra ny tantaran'ny antso, sary na horonan-tsary amin'ny alàlan'ny Google Drive eo amin'ny rahona.
Ny zavatra mahaliana momba an'ity vaovao momba ny mpampiasa iray lavitrisa eran'izao tontolo izao ity dia misy koa vondrona maherin'ny 1.000 lavitrisa, izay manome vondrona iray isaky ny olona. Statistika azo takarina tsara kokoa noho ny maha-zava-dehibe ny fifandraisan'olombelona ary, avy amin'ireo vondrona ireo, dia namela anay hifandray amin'ireo mpiara-miasa, dia ny vondrona ekipa mpilalao baolina kitra hilalao ny ligin'ny tanàna na ny fihaonan'ny teo aloha. mpianatry ny sekolinay.
Fahasamihafana amin'ny Telegram
Angamba mety hahatratra ireo vondrona WhatsApp tena lehibe lasa korontana daholo rehefa mahatratra ny fahaizany faran'izay betsaka, satria ny Telegram dia nampiditra ireo admin hahafahana mitantana azy ireo amin'ny fomba izay misy filaminana kely. Heverinay fa tsy ho ela dia hanolotra endri-javatra fanampiny hananganana karazana vondrona manokana izay misy mpampiasa maromaro manana fahaiza-manao fanampiny toy ny amin'ny Telegram na amin'ireo resaka MIRC izay saika andriamanitra ireo mpanelanelana (izy ireo).
Inona no mitranga fa mahatsapa izany isika Telegram izao dia amin'ny ambaratonga hafa amin'ny inona ny fampifangaroana endri-javatra vaovao ary manatsara be indrindra ny traikefa sy ny fifandraisan'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ity rindrambaiko fandefasan-kafatra ity miaraka amin'ilay kisary manga. Raha tsy eo ambany fiahian'ny lehibe iray dia tsy hisy ny fanerena be loatra ary hanana endrika hafa ny mpamorona raha tsy afaka mandefa endri-javatra vaovao tsy misy ahiahy.
Na izany aza, manantena zavatra betsaka kokoa avy amin'ny WhatsApp izahay Ary anisan'ireo honohono nipoitra tato ho ato, fantatra fa ny antso an-tsary dia mety ho iray amin'ireo vaovao lehibe indrindra mandritra ny volana ho avy.
Raha na inona na inona te hanana APK ve ianao? izay mamela ny fitomboan'ny vondrona ho 256 olona, ​​ary tsy te hiandry ny fahatongavan'ny fanavaozana ianao, mankanesa any amin'ny rohy ho an'ny kinova 2.12.437 ananan'i apkmirror.
Sintomy ny WhatsApp WhatsApp 2.12.437
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » apk » [APK] WhatsApp dia manaraka ny telegram amin'ny fampitomboana ny fetran'ny vondrona ho 256 olona
Fampiharana sakafo hariva misolelaka rantsantanana; Androany, Recipe mahandro sakafo ho an'ny fianakaviana